1 हाम्रो वेबसाइट ठेगाना हो: http://downloadfacetime.com
2 हामी कुन व्यक्तिगत डेटा संकलन गर्छौं र हामी किन यो स collect्कलन गर्दछौं
2.3 सम्पर्क फारमहरू
2.5 अन्य वेबसाइटहरूबाट सामग्री सम्मिलित
3 हामी को साथ तपाईंको डाटा साझा
4 हामीले तपाईंको डाटा कति लामो राख्छौं
5 तपाईको डेटामा कुन अधिकारहरू छन्
6 जहाँ हामी तपाईंको डाटा पठाउछौं
7 तपाईंको सम्पर्क जानकारी
8.1 हामी कसरी तपाइँको लगत सुरक्षा गर्छौं
8.2 हामीसँग कुन डाटा उल्लंघन प्रक्रियाहरू छन्
8.3 कुन तेस्रो पक्षहरूबाट हामी डाटा प्राप्त गर्दछौं
8.4 के स्वचालित निर्णय र / वा प्रोफाइलिंग हामी प्रयोगकर्ता डेटा को साथ
8.5 उद्योग नियामक प्रकटीकरण आवश्यकताहरू
हाम्रो वेबसाइट ठेगाना हो: http://downloadfacetime.com
हामी कुन व्यक्तिगत डेटा संकलन गर्छौं र हामी किन यो स collect्कलन गर्दछौं
जब आगन्तुकहरूले साइटमा टिप्पणीहरू छोड्दछन् हामी टिप्पणी फाराममा देखाईएको डेटा स collect्कलन गर्दछौं, र साथै आगन्तुकको आईपी ठेगाना र ब्राउजर प्रयोगकर्ता एजेन्ट स्ट्रि spam स्प्याम पत्ता लगाउन मद्दत गर्न.
तपाईंको ईमेल ठेगानाबाट सिर्जना गरिएको एक अज्ञात स्ट्रिंग (यसलाई ह्याश पनि भनिन्छ) यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने Gravatar सेवालाई प्रदान गर्न सकिन्छ. Gravatar सेवा गोपनीयता नीति यहाँ उपलब्ध छ: https://automattic.com/privacy/. तपाईंको टिप्पणीको अनुमोदन पछि, तपाईको प्रोफाइल तस्वीर तपाईको टिप्पणी को संदर्भ मा जनता को लागी दृश्य छ.
यदि तपाइँ वेबसाइटमा छविहरू अपलोड गर्नुहुन्छ, तपाईंले इम्बेडेड स्थान डाटाको साथ छवि अपलोड गर्नबाट जोगिनु पर्छ (EXIF GPS) समावेश. वेबसाइटमा आएका आगन्तुकहरूले वेबसाइटमा छविहरूबाट कुनै पनि डाटा डाटा डाउनलोड गर्न र निकाल्न सक्दछन्.
यदि तपाईं हाम्रो साइटमा टिप्पणी छोड्नुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो नाम बचत गर्न अप्ट-इन गर्न सक्नुहुन्छ, ईमेल ठेगाना र कुकीजमा वेबसाइट. यो तपाईको सुविधाको लागि हो ताकि तपाईले आफ्ना विवरणहरू भर्नु पर्दैन जब तपाई अर्को टिप्पणी छोड्नुहुन्छ. यी कुकीज एक बर्ष सम्म रहनेछ.
यदि तपाईंसँग खाता छ र तपाईं यो साइटमा लग इन हुनुहुन्छ, यदि तपाइँको ब्राउजरले कुकिज स्वीकार गर्दछ भने हामी एक अस्थायी कुकी सेट गर्नेछौं. यस कुकीले कुनै व्यक्तिगत डेटा समावेश गर्दैन र अस्वीकार गरिन्छ जब तपाईं आफ्नो ब्राउजर बन्द गर्नुहुन्छ.
जब तपाई लग इन गर्नुहुन्छ, हामी तपाइँको लगइन जानकारी र तपाइँको स्क्रीन प्रदर्शन छनौटहरू बचाउन धेरै कुकीहरू सेट अप गर्नेछौं. लगइन कुकीहरू दुई दिनको लागि रहन्छ, र स्क्रीन विकल्प कुकीहरू एक बर्षको लागि अन्तिम. यदि तपाइँ "मलाई याद गर्नुहोस्" चयन गर्नुभयो भने, तपाईको लगईन दुई हप्ता सम्म रहनेछ. यदि तपाईं आफ्नो खाताबाट लग आउट गर्नुभयो भने, लगइन कुकीहरू हटाइनेछ.
यदि तपाइँ लेख सम्पादन वा प्रकाशित गर्नुहुन्छ, एक अतिरिक्त कुकी तपाईंको ब्राउजरमा बचत हुनेछ. यो कुकीमा कुनै व्यक्तिगत डेटा सामिल छैन र तपाईले भर्खर सम्पादन गर्नुभएको लेखको पोष्ट आईडी जनाउँछ. यो पछि समाप्त हुन्छ 1 दिन.
अन्य वेबसाइटहरूबाट सामग्री सम्मिलित
यस साइटमा लेखहरूमा इम्बेडेड सामग्री समावेश हुन सक्छ (उदाहरण को लागी. भिडियोहरू, छविहरू, लेख, आदि). अन्य वेबसाइटहरु बाट इम्बेडेड सामग्री बिल्कुल उस्तै व्यवहार गर्दछ यदि आगन्तुकले अन्य वेबसाइटको भ्रमण गरेको छ.
यी वेबसाइटहरूले तपाईंको बारेमा डाटा संकलन गर्न सक्दछन्, कुकीहरू प्रयोग गर्नुहोस्, थप तेस्रो पार्टी ट्र्याकिंग इम्बेड गर्नुहोस्, र एम्बेडेड सामग्रीको साथ तपाईंको कुराकानी अनुगमन, एम्बेडेड सामग्रीको साथ तपाईंको कुराकानी ट्र्याक सहित यदि तपाईंसँग एक खाता छ र त्यो वेबसाइटमा लग इन हुनुहुन्छ.
हामीले तपाईंको डाटा कति लामो राख्छौं
यदि तपाईं एक टिप्पणी छोड्नुहोस्, टिप्पणी र यसको मेटाडेटा अनिश्चित कालका लागि कायम राखिन्छ. यो यस्तो छ कि हामी कुनै पनि फलो-अप टिप्पणीहरू स्वचालित रूपमा स्वीकार्न सक्दछौं र उनीहरूलाई मोडरेट लाममा राख्नुको सट्टा.
हाम्रो वेबसाइटमा रेजिस्टर गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि (यदि कुनै हो भने), हामी उनीहरूको प्रयोगकर्ता प्रोफाइलमा उपलब्ध गराइएको व्यक्तिगत जानकारी पनि भण्डारण गर्दछौं. सबै प्रयोगकर्ताहरूले देख्न सक्दछन्, सम्पादन गर्नुहोस्, वा कुनै पनि समयमा तिनीहरूको व्यक्तिगत जानकारी मेटाउनुहोस् (बाहेक उनीहरूले आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्न सक्दैनन्). वेबसाइट प्रशासकहरूले हेर्न र सम्पादन गर्न सक्दछन् कि जानकारी.
तपाईको डेटामा कुन अधिकारहरू छन्
यदि तपाईंसँग यस साइटमा खाता छ, वा टिप्पणी छोडेको छ, हामी तपाईको व्यक्तिगत डेटाको निर्यात गरिएको फाईल प्राप्त गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्दछौं, तपाइँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि डेटा सहित. तपाईले अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ कि हामी तपाईको बारेमा राखेको कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा मेट्न. यसले कुनै पनि डाटा समावेश गर्दैन जुन हामी प्रशासकको लागि राख्न बाध्य छौं, कानूनी, वा सुरक्षा उद्देश्यहरू.
आगंतुक टिप्पणीहरू स्वचालित स्प्याम पत्ता लगाउने सेवा मार्फत जाँच गर्न सकिन्छ.
हामीसँग कुन डाटा उल्लंघन प्रक्रियाहरू छन्
कुन तेस्रो पक्षहरूबाट हामी डाटा प्राप्त गर्दछौं
के स्वचालित निर्णय र / वा प्रोफाइलिंग हामी प्रयोगकर्ता डेटा को साथ